Inona no tokony ho fatra azithromycin? - BALLYA
Posted on Desambra 28, 2020, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Dosis sy fampiasana azithromycine
Vokatry ny azithromycin
Contra contre Azitromisinina
Torolàlana mifandraika amin'izany
Azithromycin dia macrolide antibiotika. Hita izy tamin'ny 1980 ary natomboka tamin'ny 1981. Ny anarany dia Telit, Xishumei, ary Shumei Te. Azithromycin dia antibiotika macrolide 15-membered semi-synthetic. Azithromycin dia be mpampiasa, fa mila mitandrina ianao fatra azithromycin, fampiasana ary ny voka-dratsy. BALLYAmety atao fitsapana macrolides mba hampahafantaro anao raha misy residu macrolides amin'ny ronono sotroinao ao anatin'ny 10 minitra.
2. Famantarana Azithromycin
Izy io dia mety amin'ireto aretina manaraka ireto ateraky ny bakteria mora tohina: bronchitis, pnemonia ary aretina hafa azo avy amin'ny lalan-pisefoana ambany; aretin-koditra sy hoditra malemy; haino aman-jery otitis maranitra; aretin'ny taovam-pisefoana ambony toy ny sinusitis, pharyngitis, tonsillitis, sns. (penisilinina dia zava-mahadomelina fampiasa matetika amin'ny fitsaboana Streptococcus pyogenes pharyngitis, ary koa fanafody mahazatra ampiasaina hisorohana ny tazo mamy. Azithromycin dia afaka mamongotra amin'ny fomba mahomby orpharyngeal streptococci, saingy tsy misy data momba ny fahombiazan'ny azithromycin amin'ny fitsaboana sy fisorohana ny tazo rheumatic).
Azithromycin ampiasaina ho an'ny aretin-kozatra tsotra momba ny taovam-pananahana naterak'i Chlamydia trachomatis amin'ny aretina azo avy amin'ny lahy sy vavy. Azithromycin dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny tsimokaretina tsinay tsotra izay ateraky ny Neisseria gonorrhoeae tsy mahazaka zava-mahadomelina sy ny chancroid naterak'i Haemophilus duke (mila manilika ny aretina miaraka amin'ny Treponema pallidum).
Azithromycin dia mety amin'ny pnemonia azon'ny vondrom-piarahamonina ateraky ny Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus na Streptococcus pneumoniae, izay mitaky fitsaboana mitete intravenous, ary ny aretin-kozatra pelvika ateraky ny Chlamydia trachomatis, Mymoroplasma, fitsaboana mitete intravenous aloha. Raha ahiahiana ny aretin'ny anaerobika dia tokony hampiarahana ny antibiotika fanoherana ny bakteria anaerobika.
Ity vokatra ity dia miorina amin'ny asidra gastric. Na dia 37% fotsiny aza ny bioavailability am-bava ary ny haavon'ny plasma avo indrindra dia manodidina ny 0.4μg / ml aorian'ny fatra tokana 0.5g ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 3 ora, tsara ny fizarana sela ary ambany ny tahan'ny mamatotra proteinina (7% hatramin'ny 23% ), ny antsasaky ny ainy voafafa dia 12 ka hatramin'ny 14 ora, ary ny fifantohana amin'ny prostaty, ny tonsils, ny havokavoka, ny kibo ary ny taovam-pananahana vehivavy dia mahatratra 2.6 μg / g, 4.5 μg / g, 3.6 μg / g, 6.1 μg / g sy 2.7 ～ 3.5μg / g tsirairay avy ao anatin'ny 12 ka hatramin'ny 30 ora aorian'ny fihinanana ny fanafody.
Maherin'ny 50% ny zava-mahadomelina dia avoakan'ny bile amin'ny endriny voalohany, ary ny sasany metabolites demethylated. Mijanona lava ao amin'ny sela ny fanafody ary miadana ny famotsorana. Aorian'ny fatra tokana alaina mandritra ny 14 andro dia mbola hita ihany ny fanafody tany am-boalohany tamin'ny fisotrony. Ny tahan'ny fivoahan'ny urinary ao anatin'ny 1 herinandro dia latsaky ny 6%, ary ny tahan'ny fahazoan-dàlana voa dia 1.67 ～ 3.156ml / s. Ny antony mahatonga ny fifantohan'ity vokatra ity ao amin'ny tavy dia avo kokoa noho ny fatran'ny ra ny zava-mahadomelina dia vokatry ny fivezivezen'ny zava-mahadomelina avy amin'ny sela eo an-toerana mankany amin'ireo sela etsy ambony amin'ny alàlan'ny neutrofil sy phagocytes. Ny neutrofil izay mitahiry zava-mahadomelina eo amin'ny toerana misy ny aretina dia entanin'ny bakteria hamoaka fanafody ary miteraka vokadratika.
Atao am-bava indray mandeha isan'andro, atelina tanteraka, ary azo alaina amin'ny sakafo. Takelaka azithromycin dia ampiasaina hitsaboana aretina isan-karazany. Ny fizotry ny fitsaboana sy ny fomba fampiasana dia izao manaraka izao: Ho an'ny aretina azo avy amin'ny firaisana dia vokatry ny Chlamydia trachomatis, Haemophilus duke na Neisseria gonorrhoeae, fitantanana am-bava tokana 1000 mg an'ity vokatra ity no ilaina. Fitsaboana aretina hafa: 1500 mg ny fatra totaliny, 500 mg an'ity vokatra ity dia indray mandeha isan'andro mandritra ny telo andro. Na ny fatra total dia mitovy, 500 mg amin'ny andro voalohany, 250 mg am-bava indray mandeha isan'andro amin'ny andro faha-2 ka hatramin'ny faha-5.
Raiso farafahakeliny 1h ity vokatra ity alohan'ny hisakafoanana, na 2h aorian'ny fihinanana. Ny olon-dehibe dia mihinana 0.3g isan'andro, sakafo 1 mandritra ny 3 andro; na 0.5g ho an'ny doka voalohany, 0.1g isan'andro mandritra ny 5 andro manaraka. Ny aretina azo avy amin'ny firaisana dia azo tsaboina amin'ny fatra 1g. Ny beantitra dia azo omena rehefa olon-dehibe. Ho an'ny ankizy mihoatra ny 6 volana (latsaky ny 45 kg), ny fatra isan'andro dia 10 mg / kg, ary ny fatra sy ny fitsaboana dia mitovy amin'ny olon-dehibe. Raha maka fampiatoana azithromycine ianao dia makà 5ml (200 mg) mandritra ny 3 ～ 7 taona (15 ～ 25 kg), makà 7.5ml (300 mg) mandritra ny 8 ～ 11 taona (26 ～ 35 kg), ary makà 10ml mandritra ny 12 ～ 14 taona (36 ～ 45 kg).
Ny tsy fitoviana amin'ny rà sy ny rafitra lymphatic: ny neutropenia vetivety dia hita indraindray amin'ny fitsapana ara-pitsaboana, saingy tsy misy angona azo anehoana fa misy ifandraisany amin'ny azithromycin. Ny tsy fetezan'ny sofina sy ny labyrint: Ny marary sasany dia nahatsapa fahaverezan'ny fihainoana taorian'ny nandraisana azithromycine, anisan'izany ny fahaverezan'ny fihainoana, ny tinnitus ary / na ny marenina. Araka ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana, ity tranga ity dia misy ifandraisany amin'ny fampiasan'ny marary doka avo lenta an'ity vokatra ity. Amin'ny alàlan'ny fanarahan-dia ireo marary ireo dia hita fa azo averina amin'ny laoniny ny ankamaroan'ny sofina.
Ny tsy fetezan'ny gastrointestinal: maloiloy, mandoa, mivalana, fivalanana tsy mahazo aina, tsy mahazo aina amin'ny kibo (fanaintainana na fikorontanana), fivontosana.
Rafitra hepatobiliary tsy ara-dalàna: fiasan'ny aty tsy ara-dalàna.
Ny tsy fitoviana amin'ny hoditra sy ny hoditra malemy: ny fihenan'ny alikaola ao anatin'izany ny fivontosan'ny hoditra sy ny angioedema
Taorinan'ny lisitra, misy hetsika ratsy hafa voalaza nandritra ny fampiasana an'ity vokatra ity:
Aretina sy fambolena: candidiasis sy vaginitis.
Ny tsy fitoviana amin'ny rà sy ny rafitra lymphatic: thrombocytopenia.
Ny tsy fetezan'ny hery fiarovana: fanehoan-kevitra mahazaka (tsy dia mahafaty).
Metabôlisma tsy ara-dalàna sy sakafo mahavelona: anorexia.
Aretin-tsaina: fihetsika mahery setra, fitaintainanana, fitaintainanana.
Ny tsy fetezan'ny rafi-pitabatabana: fanina, fikorontanana (mitovy amin'ny macrolides hafa), aretin'andoha, fitomboan'ny hetsika, tsy fahampian-tsofina, paresthesia, fahamamoana, torana. Tatitra tsy fahita firy momba ny tsiro / olfaction ary / na fisehoana tsy misy. Na izany aza, tsy mazava ny hoe mifandraika amin'ny fanafody.
Ny sofina sy labyrint tsy ara-dalàna: fanina.
Ny tsy fetezan'ny fo: ny palpitations sy arrhythmia anisan'izany ny tachycardia ventricular (toy ny macrolides hafa). Ny fanitarana QT sy torsade de pointes karazana tachycardia ventricular dia tsy dia voalaza loatra. Na izany aza, tsy voamarina fa ireo tranga ratsy etsy ambony dia mifandray azithromycin.
Fahasamihafana eo amin'ny lalan-dra: fihenan-tsaina.
Ny tsy fetezan'ny gastrointestinal: mandoa / mivalana (tsy dia ritra loatra), tsy fihinanan-kanina, mitohana, entritis pseudomembranous, pancreatitis ary fanovana ny lela (tsy fahita firy).
2. Contra contre Azitromisinina
toy ny erythromycine sy ny hafa macrolides, ny fanehoan-kevitra mahazaka mahery vaika toy ny angioedema sy ny allergy (tsy dia mahafaty) dia matetika no tsy voalaza. Ny fanehoan-kevitra sasany naterak'i azithromycin afaka miverimberina ary mitaky fotoana maharitra hijerena sy fitsaboana.
Satria ny aty no fomba lehibe indrindra hanafoanana ny azithromycine, ny azithromycine dia tokony hampiasaina am-pitandremana amin'ireo marary voan'ny aretin'aty mazava ho azy.
Notaterina fa ny marary mahazo fitsaboana derivative ergot dia hiteraka fanapoizinana ergot rehefa mahazo antoka antibiotika macrolide mandritra izany fotoana izany. Na dia tsy misy data mampiseho aza fa mifampiraharaha amin'ny azithromycin ny ergot, dia azo atao ara-teôria ny fanapoizinana ergot, noho izany ny azithromycin sy ny derivatives ergot dia tsy tokony hitantana miaraka.
Toy ny fiomanana amin'ny antibiotika hafa, ny saina dia tokony hojerena amin'ireo soritr'aretin'ny aretina roa sosona ateraky ny bakteria tsy mora tohina, anisan'izany ny holatra.
Saika ny fangatahana antimicrobial rehetra dia misy ny tatitra milaza ny fivalanan'ny Clostridium difficile (CDAD), anisan'izany ny azithromycin, izay manana ny henatra dia manomboka amin'ny fivalanana malemy ka hatramin'ny enteritis mahafaty. Ny fitsaboana antimicrobial dia mety miteraka fiovana eo amin'ny flora ara-dalàna amin'ny tsinay, mitarika ny fitomboan'ny Clostridium difficile. Toxin A sy Toxin B novokarin'i Clostridium difficile dia mifandraika amin'ny pathogenesis an'ny CDAD. Ny difficile Clostridium misy poizina dia mitarika amin'ny fitomboan'ny aretina sy ny fahafatesan'ny olona. Ireo areti-mifindra ireo dia mety tsy mandaitra amin'ny fitsaboana bakteria ary mety mitaky famerenana amin'ny laoniny. Ho an'ireo marary voan'ny fivalanana aorian'ny fampiasana azy antibiotika, tsy maintsy dinihina ny mety hisian'ny CDAD. Koa satria nisy tatitra momba ny CDAD nitranga 2 volana mahery taorian'ny fitsaboana antimicrobial dia ilaina ny mangataka tantara ara-pitsaboana tsara.
Ho an'ireo marary manana tsy fahampiana voa mafy (taham-panivana glomerular <10ml / min), ny fiakaran'ny rafitra azithromycine dia nitombo 33%.
Voalaza fa ny fampiharana ny hafa antibiotika macrolide dia mety hiteraka fanafoanana ny fo sy ny fanitarana ny elanelam-potoana QT, mitarika ny mety hisian'ny arrhythmia sy torsade de pointes ventricular tachycardia. Rehefa mitombo ny loza ateraky ny famerenana maharitra ny fo, azithromycin tsy azo fehezina tanteraka amin'ny vokatra mitovy amin'izany.
Tsy misy porofo manamarina fa ny azithromycin dia misy fiatraikany amin'ny fahafahan'ny marary mitondra sy miasa ny milina.
3. Fifandraisana azithromycin
Ity vokatra ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny theophylline, warfarin, carbamazepine, prednisone methyl, sns. Raiso ity vokatra ity 1h alohan'ny na 2ora aorian'ny naka ny antacid. Roa ora alohan'ny handraisana ity vokatra ity, ny dimetan'ny cimetidine iray dia tsy misy fiantraikany amin'ny fifantohan'ny ra amin'ity vokatra ity. SASANY macrolides mety hisy fiantraikany amin'ny metabolisma an'ny digoxine. Noho izany, ny fampiharana tsy an-kijanona an'ity vokatra ity dia mety hampitombo ny fifantohan'ny ra digoxine, noho izany dia tokony horaisina ny saina.
Ity vokatra ity dia tsy tokony hampiasaina ampiarahana amin'ny fanafody ergôra, satria mety hiteraka fanapoizinana erotra amin'ny marary izany; ankoatry ny, macrolides dia voalaza fa mampitombo ny digoxine (manova ny flora-tsinay), ny cyclosporine ary ny carmidazine (metabolisme Inhibit) mifantoka ny rà, koa raha ny AM sy ireo zava-mahadomelina telo ireo dia raisina miaraka amin'izay dia mety hampitombo ny fatran'ny ra an'ireny fanafody ireny koa. Tokony harahi-maso ny fatran'ity ra ity rehefa atambatra ireo fanafody ireo.
4. Torolàlana mifandraika amin'izany
Raha ny angom-baovao avy any an-toerana, amin'ireo marary 19 izay misy fiatraikany ratsy noho ny azithromycine am-bava, dia 3 no nampitombo ny isan'ireo fanafody isan'andro, ary ny 5 nanohy nihinana ny fanafody nandritra ny 5 andro, ka nahatonga ny fiakaran'ny fiatraikany noho ny fanafody tsy ara-dalàna. Ny risika dia mahatratra 40% mahery. Raha ny marina, toy ny zava-mahadomelina efa ela, azithromycin mila raisina indray mandeha isan'andro fotsiny.
Azithromycin dia taranaka vaovao an'ny antibiotika macrolide. Raha ampitahaina amin'ny erythromycine, manana fiasa mahery vaika mahery vaika kokoa izy, karazana bakteria midadasika kokoa ary fanehoan-kevitra maharatsy kokoa. Lafin-javatra iray tena lehibe hafa koa ny hoe azithromycin manana vokarin'ny post-antibiotika mahazatra, izay misy ifandraisany amin'ny antsasaky ny rany maharitra.
Ny tahirin-kevitra mifandraika dia mampiseho fa aorian'ny fampidirana azithromycine am-bava na amin'ny intravenous, ny antsasaky ny rany dia mety haharitra 35 ka hatramin'ny 48 ora, noho izany azithromycin dia mbola afaka mitazona ny fatra voafetra mahomby farafahakeliny ao anatin'ny 72 ora aorian'ny fijanonan'ny zava-mahadomelina. Ity endri-javatra ity, amin'ny lafiny iray, dia mahatonga azy io hisy vokany maharitra. Mila raisina indray mandeha isan'andro fotsiny izany mba hahatratrarana ny fitsaboana mitovy amin'ny erythromycine nalaina imbetsaka isan'andro.
Etsy ankilany, tsy mila tanterahana mitohy. Rehefa mampihatra azithromycin hitsaboana mycoplasma pnemonia sy mycoplasma areti-mifindra ao amin'ny lalan'ny urogenital dia matetika no raisina ny fitsaboana mitohy, izany hoe, ampiharina mandritra ny 3 andro ilay fanafody ary ajanona mandritra ny 4 andro, ary mitohy ny faribolana. Amin'izany fomba izany, ny fihinanana ny fanafody indray mandeha isan'andro sy ny fihinanana fanafody mandritra ny fotoana fohy dia mety hampitombo ny fanajana ny marary ary hampihena be ireo fiatraikany ratsy.
Na izany aza, ny marary sasany dia mbola tsy nahatsapa an'io toetra mampiavaka ny azithromycine io, na mifototra amin'ny fahazarana mihinana zava-mahadomelina in-3 isan'andro, na mahatsiaro ho tsy azo antoka izy ireo amin'ny fandraisana fanafody fotsiny indray mandeha isan'andro ary "manompo 3 ary mampiato 4", noho izany dia mampitombo ny isan'ny fanafody an-tsitrapo izy ireo, mandray azithromycin imbetsaka isan'andro, na manapa-kevitra ny hanohy fanafody irery. Ny valiny dia tsy manampy amin'ny fanatsarana ny toe-javatra, mba hampitomboana ny fiatraikany ratsy.
Noho izany, ny marary dia tokony hanaraka tsara ny torohevitry ny dokotera, raiso azithromycin indray mandeha isan'andro, ary misoroka fanafody maro mandritra ny iray andro sy fanafody maharitra.
Azithromycin misy vokany tsara amin'ny areti-mifindra maro, fa ny vokadratsiny sy ny fanoherana ny zava-mahadomelina an'ny Azithromycin dia miharihary. Tokony hanaraka an-tsakany sy an-davany ny torolalan'ny dokotera isika amin'ny fifehezana ny fatra azithromycin.
MAYOCLINIC: Azithromycin (Làlana am-bava)